Fanakelezam-piparitahana - Wikipedia
Ny fanakelezam-piparitahana (anglisy: defragmentation), amin’ny kajimirindra, dia ny fananekelezana na fanesorana ny fiparitahan’ny angona ao amin’ny rafi-drakitra. Ny fanakelezam-piparitahana dia manao izay hampifanakaiky ny singan’angona ao amin’ny kapila mba hampitombo ny hafaingam-pamakiana ary mamela velarana malalaka hampahakelezana ny fiparitahan’ny rakitra hosoratana.
1 Fahatongavan’ny fiparitahana
2 Mpanakely fiparitahana ary fomba fanaovana araka ny rafi-drakitra
Fahatongavan’ny fiparitahana[hanova | hanova ny fango]
Ny mahatonga ny fiparitahana dia ny rafi-drakitra tsy afaka manokana toerana itahirizana rakitra indray misoratra eo amin’ny kapila mateza, ka mametraka singany eny amin’ny "lavadavaka" ao enalenalan’ny rakitra efa misy (lavaka misy noho ny famafana ataon’ny mpandrindra milina) . Ny rakitra lehibe ary ny isan’ny rakitra tahirizana no mandray anjara amin’ny fiparitahana ary ny fahaverezam-kafaingana. Natao hanakelezana izany fahaverezan-kafaingana izany ny fanakelezam-piparitahana.
Andao heverina ny fitrangan-javatra araka ny miseho eo amin’ny sary eo ankavanana:
Manana rakitra dimy ny kapila , A hatramin’i E, izay samy mampiasa blaokin-toerana folo (ho an’ity fizarana ity, ny atao hoe blaoky dia ampahan-toerana omen’ny rafi-drakitra).
(1) Eo amy kapila tsy misy inona na inona, mifanesy ny rakitra izay nosoratana misesy.
(2) Raha voafafa ny rakitra B , dia roa ny zavatra mety hitranga: hanamarika ny toerana nalain’i B ho tsy misy inona na inona mba hahafahana mampiasa azy amin’ny manaraka, na manisaka ny rakitra rehetra mba tsy hisiana "lavaka" eny afovoan-kapila. Noho ny fanisahana mandany fotoana sy angovo dia avela ho foana ny toerana nametrahana an’i B, ary hanamarika ilay toerana foana ho afaka ametrahana angona ho an’ny rakitra ho avy.
(3) Voatokana ny toerana hipetrahan’ny angon’ny rakitra F, ary homby ao amin’ny toerana nisy ny blaoky B taloha ilay izy. Blaoky efatra izany no isan’ny blaoky mbola malalaka ao amin’ilay "lavaka" navelan’i B.
(4) Mila blaoky efatra ny rakitra G. Homby ao amin’ilay "lavaka" navelan’i B ary tsy nampiasain’i F ilay rakitra. Araka izany dia tsy misy intsony ny lavaka.
(5) Niitatra ny rakitra F, noho ny tsifisian’ny lavaka mety ipetrahany dia eny amin’ny faran’ny kapila (izany hoe aorian’ny E) no lasa toeran’ny angona nampiana tamin’ny rakitra F.
Mpanakely fiparitahana ary fomba fanaovana araka ny rafi-drakitra[hanova | hanova ny fango]
FAT : Ny mpandrindra milina MS-DOS 6.x ary ny Windows 9x dia manana fitaovana antsoian hoe Defrag. Ny versiôna DOS dia versiôna voafetra Norton SpeedDisk. Ny versiona niaraka tamin’ny Windows 9x dia voalisansa avy tamin’i Symantec Corporation, ary voalisansa avy tamin’ny orinasa Condusiv Technologies ny versiôna tonga niaraka tamin’ny Windows 2000 ary XP.
NTFS dia nampidirina niaraka tamin’i Windows NT 3.1, fa tsy nahitana fahafahana manakely fiparitahana ny mpitondra rafi-drakitra NTFS (NTFS system driver). Amin’i Windows NT 4.0 dia nampidirina ny API fanakelezam-piparitahana izay afaka ampiasain’ny fitaovana amboarin-kaf; na dia izany aza, tsy nampiarahana ny rindrankajy fananekelezam-piparitahana. Tamin’i Windows 2000, XP ary Server 2003 dia nampiditra fitaovam-panakelezam-piparitahana mifototra amin’i Diskeeper izay nampiasa ny API fananekelezam-piparitahana i Microsoft. Tamin’i Windows Vista, 7 ary 8 dia nampihatsarana ny fitaovana ary nomena interfasy vaovao tsy ahitana sy sarin-kapila ary tsy ampahan’ny fitantantanan-tsolosaina intsony. Maro koa ireo rindrankajy fananekelezam-piparitahana amboarin-kafa ary azo ampiasaina amin’ny mpandrindra milin’i Microsoft Windows.
Ny UFS an’i BSD ary FreeBSD dia manana mpanokana anaty izay mitady ny hanakely ny fananekelezam-piparitahana amin’ny fotoana anoratana eo amin’ny kapila. Mamehy tsara ny fahasimban’ny rafitra izany rehefa ampiasaina elaela.
ext2, ext3 ary ext4 an’i Linux: toa i UFS, ireo rafi-drakitra ireo dia mampiasa teknika fanonanana natao hamehezana ny fiparitahana. Ny vokatr’izany dia tsy ilaina ny manakely fiparitahana amin’ny ankabeazan’ny tranga. Mampiasa mpanakely fiparitahana (defragmenter) antsoina hoe e2defrag ny rafi-drakitra ext2, izay tsy mandeha amin’i ext3. Na dia izany aza, ny rindrankajy hafa izay mety tsy miankina amin’ny rafi-drakitra toa i defragfs, dia mety ampiasaina amin’ny fananekelezam-piparitahana ny rafi-drakitra ext3. Azo ampiasaina amin’i ext3 amin’ny alalan’ny backward compatibility ny fitaovam-pananekelezam-piparitahana ampiasaina amin’ny rafi-drakitra ext4. amin’izao fotoana izao dia azo ampiasaina amin’ny rafi-drakitra ext4 ny rindrankajy e4defrag.
VxFS dia manana ny fitaovana fsadm izay ahitana fananekelezam-piparitahana
JFS dia manana ny fiftaovana defragfs amin’ny mpandrindra milina IBM
HFS Plus izay nampidirina tamin’i Mac OS 8.1 tamin’i 1998 dia manana fanatsarana amin’ny algôritma fanokanana ho fanandramana manakely ny fiparitahan-drakitra tsy vakiana amin’ny mpanakely fiparitahana misaraka.
WAFL amin’i mpandrindra milina ONTAP 7.2 an’i Netapp dia manana baiko antsoina hoe "reallocate" izay natao hanakelezana ny fiparitahan’ny rakitra lehibe.
Ny rafi-drakitra XFS dia manome fitaovana fananekelezam-piparitahana antsoina hoe xfs_fsr
ADFS, ny rafi-drakitra ampiasain’ny RISC OS ary ny solosaina Acorn Computers, dia mamehy ny fananekelezam-piparitahana ho azy ary tsy mila fananekelezam-piparitahana atao tanana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanakelezam-piparitahana&oldid=767855"
Voaova farany tamin'ny 15 Aprily 2015 amin'ny 20:10 ity pejy ity.